Ubungqina-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ukusukela oko u-Ouzhan waqala urhwebo lwehlabathi, siphumelele ukuthanda abathengi abaninzi:
Ndonelisekile yinkonzo ka-ouzhan. Inkonzo yabathengi iyakhawuleza kwaye uGaby wenze umsebenzi omangalisayo kwiindawo zam. Ndijonge phambili ekusebenzisaneni no-Ouzhan kwakhona!
Ukujika ngokukhawuleza kunye nemveliso esemgangathweni eyenziwe kwi-spec. Andikwazi ukubuza ngaphezulu koko u-Ouzhan uliqabane elihle!
Icandelo lenziwe kusetyenziswa iimodeli ze3D. Ngexesha lokuxoxwa komyalelo, iinjineli bezimamele kakhulu kwaye zindincedile ekufumaneni iimpazamo zam ukuze ndizilungise. Yenza umgangatho ophezulu. Ukuthunyelwa kwalandelwa. Icandelo ngalinye lalipakishwe ngokugqibeleleyo, ngokwahlukileyo kwabanye kwifilimu yamaqweqwe amaninzi. Ndonwabile ngomboneleli. Umphathi uChandler wayenxibelelana, ephendula imibuzo kwangolo suku. Ndiyathemba ukuqhubeka nentsebenziswano yethu.
Le ndawo ivenkile ye-CNC! Ndonwabe kakhulu yinkonzo kwaye ngoku ndinomhlobo ondincedayo kwii-odolo zam yenza ukuba yonke into ibe lula kakhulu. Ndibeka ii-odolo ezingaphezulu ngoku, inkonzo ekhawulezayo kwaye inobuhlobo kakhulu. Cela iRio ukuba muhle ukusebenza nayo!
Inkonzo ebalaseleyo kuyo yonke inkqubo. Unxibelelwano olukhawulezayo nge-imeyile kunye newhatsapp exoxa ngazo zonke iimfuno zethu kunye neenkcukacha kunye neesampulu ezibonelelweyo ngqo kwimizobo yethu yomgangatho ophezulu kakhulu kunye nesiphelo. Sijonge ukusebenza no-Ouzhan kwixesha elizayo kwinto esikholelwa ukuba iya kuba bubudlelwane bexesha elide kwiimveliso ezininzi kwipotfoliyo yethu.